म मेरो सिंगो र सग्लो घर हेरेर कसरी बस्न सक्छु? - Enepalese.com
म मेरो सिंगो र सग्लो घर हेरेर कसरी बस्न सक्छु?
इनेप्लिज २०७२ वैशाख २१ गते १०:४८ मा प्रकाशित
आज सिंगो देश रोएको छ, मेरो मात्र्यूभूमी शोकाकूल छ! म जहॉ छु, जे छु, र जस्ले मलाई चिनाएको छ त्यो नै मेरो मात्र्यूभूमी नेपाल हो ! यस कहाली लाग्दो अबस्थामा म मेरो सिंगो र सग्लो घर हेरेर कसरी वस्न सक्छु जव कि मेरा छिमेकी घरबार विहीन भै हिलो र फोहरमा वस्न बाध्य छन !